12 Waxyaabood oo aad ku hormarin karto guurkaaga - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»12 Waxyaabood oo aad ku hormarin karto guurkaaga
Qaladaad yar yar ayaa burburin kara guurka iyadoo sidoo kale waxyaabo yar yar ay xiriirka ka dhigi karaan mid shaqeeya oo lamaanayaasha isku soo dhoweeya.
Hoos ka aqriso 12 waxyaabood oo hormarinaya guurka.
Raali geli markaad qaldantahay
Inaad dhahdo “waanka xumahay” ayaa guurka ka bad baadin karta mudan badan iyo dood iyo burbur ku imaan kara. Markaad qalad sameyso, ka raali geli oo horey uga soco, waa xalka ugu wanaagsan haddii aad jeceshahay xiriirkaaga.
Raaligelinta waa mid halka aqbalaadda raaligelinta ay tahay mid kale. Marka lamaankaaga uu raali gelin bixiyo diyaar u noqo inaad aqbasho horeyna uga soco.
Waxay meesha ka saareysa walbahaar badan iyadoo aqbalaadda raaligelinta ay wax kasta ka dhigeyso mid fudud. Inaad sii careysnaato xittaa marka uu seygaaga ama xaaskaaga ku raaligeliso ma ahan waddo horumar leh.
Wadajir wax u qabta
Kuwo isjecel kaliya waa inaadan noqonina adiga iyo xaaskaaga, waa inaad sidoo kale noqotaan saaxiibo. Inaad si wadajir ah wax walba u qabataan, wax iskula daawataan waxay xoojineysaa xiriirka idiin dhexeeya labadiina.
Usheeg gacalisadaada/ gacaliyahaaga jacaylka aad u qabto
Haddii aadan seygaaga/xaaskaaga u sheegin inaad jeceshahay yaa u sheegaya? Usheeg qofka kugu weyn jacaylka aad u qabto inta uu la egyahay.
Mar kasta faani seygaaga/xaaskaaga; haddii ay xirato ama uu xirto labis qurxan, ammaan; haddii xaaskaaga ay sameyso wax wanagsan ku amaan taasi waa mid ka farxineysa, lamaane faraxsan ayaa sameeya xiriir farxad ku dhisan.
Laabta ku qabo kulanka sariirta kadib
Galmada waa inaysan noqon galmo uun, waa inay noqotaa waqti naxariis iyo raaxo aad la wadaagto lamaantaada; waa inay noqotaa waqti jacayl iyo dareen.
Daraasad ayaa soo bandhigtay in lamaaneyaasha laabta isku qabta ama iskoolkooliya galmada kadib ay leeyihiin xiriir qanacsanaan ku dhisan.
Haddii aadan dhageysan lamaankaaga/lamaantaada kadib waxaan layaabayaa cida dhageysaneysa. Dhageyso seygaaga/xaaskaaga si dareen leh.
Waa in lamaaneyaasha ay iscaawiyaan midba kan kale intaad dhaleeceyn lahayd xaaskaaga/seygaaga, caawi seygaaga/xaaskaaga oo dardar geliya horumarka guurka.
Noqo midaan xukun badneyn
Xiriirka waa inuusan noqon waxaad rabto iyo sidaas mar walba wax u rabto; isbar inaad tanaasusho.
Ha noqon mid caro badan
Isbaridda inaad xakameyso caradaada waa mid saameyn weyn ku yeelaneysa xiriirkaaga. Inaad si fudud ku carooto waxay keeneysaa dood iyo dagaal, xiriirkaaga sidaas kumasii dhisnaan karo.
Noqo qof ixtiraam badan
Inaad dhahdo “mahadsanid” waxay ka dhigantahay inaad jeceshahay waxay sameysay lamaantaada/lamaankaaga, noqoshada qof xushmad badan waxay muujineysaa inaad qiimeyso xiriirka iyo lamaantaada sidoo kale.
Wax ka baro qaladkii hore
Dhibaato iyo cadaalad darro ayay u tahay lamaantaada inaad ku celceliso qalad aad horey u sameysay mar iyo kabadan.
Wax ka baro qaladkaas oo hubi inaadan mar kale sameyn isla qaladkii.